Turkiga oo raadinaya nin la baxsaday 2 bilyan oo doolar! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Turkiga oo raadinaya nin la baxsaday 2 bilyan oo doolar!
Turkiga oo raadinaya nin la baxsaday 2 bilyan oo doolar!
Turkiga ayaa raadineysa nin la baxsaday 2 bilyan oo doolar
Istanbul (Halqaran.com) – Dacwad oogayaasha Turkiga ayaa Khamiistii furay baaritaan kadib markii aasaasihii shirkadda Thodex ee sarifka lacagta loo yaqaano Cryptocurrency taasoo fadhigeedu yahay magaalada Istanbul uu xiray shirkadda isla markaana uu dalka ka cararay iyadoo la sheegay in hanti dhan 2 bilyan oo doolar ay tahay hantida maalgashadayaasha.
Warbixinada warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaya in ninkaan lagu magacaabo Faruk Fatih Ozer oo 28-jir ah uu u baxsaday midkood Albania ama Thailand.
Toddobaadkii hore dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay mamnuuci doonto adeegsiga lacagahaas laga billaabo 30-ka bisha April.
Saraakiisha Turkiga ayaa sii daayay sawirka aasaasaha shirkadda Thodex Ozer oo maraya kontaroolka baasaboorka garoonka diyaaradaha ee Istanbul isagoo ku sii jeeda meel aan la cayimin.
Ozer ayaa sheegay in eedeymahaas loo soo jeediyay ay yihiin “Kuwo aan sal iyo raad toona laheyn.”
Saraakiisha ayaa sidoo kale xiray akoonada bankiga ee Mr Ozer.
Nin la baxsaday 2 bilyan oo doolar